Zavatra mahaliana momba an'i San Marino
San Marino dia fanjakana madinika sy mahaleotena, araka ny asehon'ny tantarany sy ny zava-misy iainan'ny fiainana maoderina. Ny San Marino indray, izay maherin'ny 60 metatra toradroa, dia navotsotra sy nanafika, saingy niaro hatrany ny faritaniny sy ny fahaleovan-tenany. Ny anaran-tsarin'ity firenena ity dia Serenissima Repubblica di San Marino, izay midika amin'ny teny Italiana ny Repoblikan'ny San Marino any San Marino.
Ny firenena dia eo anelanelan'ny Monte Titano , tarihin'i Gaza, ary manodidina an'i Italia avy amin'ny andaniny rehetra. Misy tanàna miorina mena miisa sivy ahitana trano fatoriana sy trano fahiny, ary ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny firenena no mipetraka. Avy any an-tendrombohitra dia misy fomba fijery mahafinaritra, ary amin'ny toetr'andro mazava no ahitanao ny morontsirak'i Adriatika, izay misy tionelina iray naorina avy any amin'ny tendrombohitra 32 km miala.
Mahaliana ny momba an'i San Marino
Na izany aza dia tsy manintona ireo mpizaha tany izany. San Marino dia mitahiry zava-baovao mahaliana maro izay afaka mahagaga ny mpandeha. Ireto ny sasany amin'izany:
San Marino no fanjakana tranainy indrindra any Eoropa, voatahiry any amin'ny sisintany maoderina.
Ny daty nanorenana ny firenena dia 301, raha, araka ny fanazavana, dia niorina teo akaikin'ny Tendrombohitra Monte Titano ilay tompon-trano Marino. Nandositra niala ny nosy Rab (ankehitriny Kroasia izy), nandositra ny fanenjehana noho ny finoany kristianina. Tatỳ aoriana, nisy monastera iray naorina teo akaikin'ny efitra nisy azy, ary izy no notendrena nandritra ny androm-piainany.
Ao San Marino, ny fandaharam-potoanany, izay manomboka ny fananganana ny fanjakana - 3 Septambra 301. Izany indrindra no fiandohan'ny taonjato XVIII.
Mahagaga fa ny lalàm-panorenana voalohany teto amin'izao tontolo izao dia nekena tany San Marino tamin'ny taona 1600.
Ny filoham-panjakana dia governemanta roa, izay voafidy nandritra ny 6 volana ny Filan-kevitra Foibe. Amin'ny ankapobeny, ny iray amin'izy ireo dia an'ny iray amin'ireo fianakaviana manamboninahitra mendri-piderana, ary ny faharoa - ny solontenan'ny ambanivohitra. Mandritra izany fotoana izany, samy manana ny fahefany ny vetoo. Tsy mandray karama ireo toerana ambony ireo.
Rehefa nanatona an'i San Marino i Napoleon, dia gaga izy noho ny fisian'ity firenena kely be tendrombohitra ity ka nanolo-tena hanao sonia fifanarahana momba ny fandriampahalemana ary naniry ny hanome ny sasany amin'ny faritra manodidina ho toy ny ankehitriny. Nihevitra ny Sanmarins ary nanasonia ny fifanekena momba ny fandriampahalemana, ary nanapa-kevitra ny handà ilay fanomezana.
Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa dia nanome fialokalofana ho an'ireo Italiana sy Jiosy maherin'ny 100.000 ireo mponin'i San Marino, izay avo 10 heny tamin'ny mponina tao tamin'izany fotoana izany.
Manana haba ambany ny firenena, noho izany dia manintona ny fiainana, ny sehatry ny banky ary manao raharaham-barotra. Mandritra izany fotoana izany, tsy mora ny mahazo ny zom-pirenena ao amin'ny firenena: tsy maintsy miaina ao amin'ny repoblika mandritra ny 30 taona fara-fahakeliny ianao na amin'ny fanambadiana ara-dalàna miaraka amin'ny Sanmarin 15 taona.
Ny ankamaroan'ny mponina - 80% - ireo mponina indizeny ao San Marino, 19% - Italiana. Ny fiteny ofisialy dia italianina. Mandritra izany fotoana izany dia manala baraka ireo teratany teratany Sinoa rehefa antsoina hoe Italiana izy ireo, satria manome voninahitra ny fahaleovan-tenany.
Tsy manana trosa ny firenena, ary misy aza ny vola ambolena.
Ny mponina any San Marino dia manana fidiram-bola 40% avo lenta noho ny mponina any Italia.
¼ amin'ny fidiram-bola isan-taona avy amin'ny firenena no entin'ny sampana mailaka, noho izany dia manaja azy ireo ny mponina eo an-toerana.
Ny tafika mitam-piadiana ao San Marino dia olona 100, ary tsy misy drafitra fanerena ao amin'ny firenena.
Satria ny ankamaroan'ny vahoaka Sanmarin dia mifankahalala amin'ny fomba iray na hafa, misy ny mety hisian'ny fitsarana an-tendrony amin'ny famahana olana amin'ny fitsarana. Noho izany, raha tena olana goavana ny adihevitra dia voasa any amin'ny firenena ny mpitsara Italiana.
Ny ekipa nasionalin'ny baolina kitra San Marino ihany no nandresy tamin'ny fotoana iray - tamin'ny lalao fifaninanana miaraka amin'i Liechtenstein miaraka amin'ny 1: 0.
Olona 3 tapitrisa isan-taona no mitsidika an'i San Marino. Ao amin'ny fidirana ao amin'ny firenena dia tsy misy fombafomba, mifanohitra amin'izany, eo amin'ny làlana mankany Rimini (toeram-pialan-tsasatra italiana) ianao dia handalo ny andohalambo miaraka amin'ny soratra hoe "Tonga soa eto amin'ny tanin'ny Fahalalahana".
Ny San Marino dia manana ny tsindrin-tsakany "Tendrombohitr'ireo Tendrombohitra telo" - sarona ravin-damba, voaravaka kafe sy sôkôla miaraka amin'ny hazom-boaloboka.
Inona no hitondrana an'i Liechtenstein?
Fanjonoana any amin'ny Repoblika Tseky
Fialan-tsasatra any Montenegro tamin'ny Septambra
Fivarotana any Belzika
Rentano fiara any Norvezy
Flower Kalanchoe - fananana medikaly sy fampiharana amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Aiza no itomboan'ny pomelo?
Cap-scarf - roa amin'ny iray
Rano ao anaty valizy
Ureplasma amin'ny vehivavy - antony
Mastitis amin'ny zaza vao teraka
Ohatrinona ny proteinina ao an-tsena?
Dyufaston - fiantraikany hafa
Charlotte miaraka amin'ny abrisika
Ny teoria an'i Karma
Tena mahafinaritra ny mahandro sakafo?